သတင်းမှားသောသတင်းမီဒီယာသည် Bogus လိင်စွဲချက်ကိုလေ့လာခြင်း - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်порно
ဇူလိုင်လ 24, 2013 အားဖြင့်အပေါ် Published ရောဘတ် Weiss, LCSW, CSAT-S က in ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်အတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့လိင်
ရောဘတ် Weiss LCSW, CSAT-S နှင့် Stefanie Carnes ပါရဂူဘွဲ့, CSAT-S
တစ်တစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ဝေခုနှစ်တွင် လေ့လာချက် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကထုတ်ဝေ, သုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဘယ်အရာကိုမကြာခဏ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ" အဖြစ်ချေါဖြစ်ပါတယ်ပိုကောင်းတဲ့ရောဂါဗေဒအပြောင်းအလဲအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်စောဒကတက် "မြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ။ " ဒီဆောင်းပါး၏ထုတ်ဝေပြီးနောက်မီဒီယာများ၏လူအစုအဝေးတို့သည်ကောက်ကြောင်းအကြံပြု ဤလေ့လာမှု၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာများ၏ရောဂါအဘို့အဘယ်သူမျှမသိပ္ပံနည်းကျအခြေခံရှိကွောငျးကိုသရုပ်ပြ စှဲမွဲမှု။ ဒါကလေ့လာမှု၎င်း၏မျိုးပထမဦးဆုံးအတိုင်းအတာများအမှားအယွင်းများနှင့်အတူနှက်များနှင့်မှာအကောင်းဆုံးအပြီးအပြတ်ကောက်က၎င်း၏တွေ့ရှိချက်နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်းဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲမီဒီယာအာရုံစိုက်မှု-getter ဖြစ်သောပြဿနာလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, အမှာစကားပြောကြားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကအများဆုံးဖွယ်ရှိ, မီဒီယာအာရုံစိုက်မှုအများကြီးရနေဆဲဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုတွင်, သုတေသီများစောင့်ကြည့် ဦးနှောက် “ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားထိန်းချုပ်ရန်ပြcontrollနာများရှိသည်” ဟုမိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံသူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ၅၂ ယောက်၏လှုပ်ရှားမှု (EEG နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်း) ။ ထို့နောက်သုတေသီများသည်ဤလူများကိုဓာတ်ပုံ ၂၂၅ ခုထက် ပို၍ ကြည့်ရှုရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ EEG သည်သူတို့၏ ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုင်းတာရာတွင်အကြမ်းဖက်မှုမှသည်နှင်းလျှောစီးသူများအထိယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့လိင်အတူတကွလိင်မှုပြုခြင်းအထိအရာအားလုံး၏ဓါတ်ပုံများကိုကြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ ပါ ၀ င်ဖြေဆိုသူများသည်သူတို့၏လိင်ဆန္ဒနှင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းလွှာများစွာကိုဖြည့်စွက်ခဲ့သည်။ အမှန်ကအခြေခံအားဖြင့်သုတေသီများသည် EEG ဖတ်ရှုမှုနှင့်မေးခွန်းပုံစံအမျိုးမျိုးတွင်ပါ ၀ င်သူများ၏ရမှတ်များအကြားဆက်စပ်မှုကိုရှာဖွေနေသည်၊ porn အသုံးပြုမှုကိုစွဲလမ်း (အနှစ်သာရအတွက် neurobiological ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်သော) သို့မဟုတ်မျှသာမြင့်မားသောလိင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာမှုရဲ့လွှတ်ပေးရန်ကတည်းကဝေဖန်သူများကနမူနာအုပ်စုတစ်စုကုသမှု-ရှာကြံထံမှသိသိသာသာကွဲပြားကြောင်းစိုးရိမ်မှုများအပါအဝင်အထဲတွင်မြောက်မြားစွာအားနည်းချက်တွေကိုကိုးကားခဲ့ကြ လိင် စွဲနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုစမ်းသပ်ဘာသာရပ်များရလဒ်နှင့်အတူဝငျရောကျစှကျနိုငျခဲ့သောအခြားဖြစ်နိုင်ခြေ Co-နေကြလို့ပဲအခြေအနေများအဘို့အပြမခံခဲ့ရပါ။ ထို့အပြင်ဖွယ်ရှိအတိုင်းအတာ invalidated နှင့်စာရင်းဇယားပုံပျက်သောလေ့လာမှုအတွက်တူရိယာ၏တဦးတည်းဂိုးသွင်းဖို့အသုံးပြုမဟာဗျူဟာလောက်လေးနက်မေးခွန်းများကိုရှိပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်တစ်ဦးဘာသာရပ်ရဲ့ hypersexuality ၏သုတေသီများ '' ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အဓိကအားဦးနှောက် Scan ဖတ်တစ်ကိုယ်တော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုစောင့်ကြည့်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်သော်လည်းတစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကတစ်ဦးချင်းစီရဲ့တုံ့ပြန်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။ မည်သည့်လိင်စှဲလမျးသူသင်ပြောပြနိုင်သကဲ့သို့, သူတို့ထဲကအများစုဟာအကြောင်းကိုခံစားရနှင့် on-the-screen ကိုလှုပ်ရှားမှုနှိုင်းယှဉ် In-The-ဇာတိပကတိအားဖြင့်လိင်တုံ့ပြန်ပုံကိုအတွက်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရှိသေး၏။ အများဆုံးအလွယ်တကူသိသာအတိုင်းအတာများအမှားဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory (SDI) ၏သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပမေဲ့အံ့သွ, သုတေသီသုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် သာတစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဤပြည့်စုံသောမေးခွန်းလွှာ၏ - တစ်ကိုယ်တော်လိင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများကိုရှင်းလင်းစွာလျစ်လျူရှု။ ဦး နှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်သူတို့စောင့်ကြည့်နေသည့်အတိအကျလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
Fe ရှုပ်ထွေး eling? ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဖြစ်ကြသည်။
ထို့အပြင်စမ်းသပ်ဘာသာရပ်များ၏ကြိုတင်စိစစ်လှသောမလုံလောက်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုက“ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောပြissuesနာများ” ကိုအမျိုးအစားတူအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအချို့သောအကြောင်းအရာများသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများမဟုတ်ကြပေ။ သုတေသီများသည်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ လိင်ကွဲလိင်တူဆက်ဆံသူများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူများကိုမတူညီသောစမ်းသပ်မှုအမျိုးအစားများကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းသည်လိင်တူချင်းချစ်သောလိင်ဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုအတူတူပြသခြင်းဖြစ်သည်။ တူညီသောနည်းလမ်း) ။ ထို့အပြင်စမ်းသပ်မှုဘာသာရပ်များကိုရုပ်ငြိမ်ဓါတ်ပုံများသာပြသသည် - streaming HD ဗီဒီယိုများနှင့် live webcam တို့ကအများစုမှာအသုံးပြုလေ့ရှိကြသည်။
နောက်ထပ်ဝေဖန်မှုဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုဟာစာရေးဆရာ '' ဘာသာရပ်များတိုင်းတာရန် EEGs အပေါ်မှီခိုအားထား '' ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, EEGs တစ်ဦးအသုံးဝင်သောသိပ္ပံနည်းကျ tool ကိုသော်လည်း, တစ်ခုသာအချို့သောအတိုင်းအတာအထိ။ အဆိုပါရိုးရှင်းတဲ့အမှန်တရားကသူတို့ကိုတုံးတူရိယာများ၏အာရုံကြောနှင့်ညီမျှအောင်, ဦးခေါင်းခွံ၏ပြင်ပမှ EEGs အတိုင်းအတာဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (ဆုလာဘ်, ခံစားချက်၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်စကားရပ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်မြောက်မြားစွာဦးနှောက်တိုင်းဒေသကြီးများ၏ရှုပ်ထွေးဆက်စပ်မှုတွေကြည့်တဲ့အခါဒီခဲအဓိပ္ပါယ်, မှတ်ဉာဏ်, ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း, etc)
အနည်းဆုံးသုတေသီ့လင်းလင်းရည်ညွှန်းကိစ္စကိုမတည်ရှိပါဘူးကြောင်းညွှန်ပြကြသည်မဟုတ်။ အဲဒီအစား, သူတို့ကပြဿနာတစ်ခုစွဲမဟုတ်ပါဘူးနှင့် "မြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ" အဖြစ်က conceptualizing ပိုပြီးတိကျပါလိမ့်မယ်ကြောင်းကိုငြင်းခုန်။ သို့သော်ဤသုတေသီများဦးနှောက်၏တူညီသောဒေသများလေ့လာသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ် (အပြုအမူ) စှဲမှာရှာဖွေနေယခင်သုတေသနအတွက်အသုံးပြုသွားမည်ခဲ့ကြကြောင်းတူညီသောနည်းပညာများကိုအသုံးမကြဘူး။ ဂျာနယ်ထဲမှာဖြန့်ချိထားတဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာ Socioaffective အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စိတ်ပညာဒေါက်တာ Donald ဟီလ်တန်ခဲသိပ္ပံပညာရှင်များလိင် (နှင့်အခြားသဘာဝအလျောက်လုပ်ငန်းစဉ်များ) စှဲဖြစ်နိုင်သည်ကိုယုံကြည်ဖို့မဦးနှောက်ကိုသုတေသနပြုတာအကျဉ်းချုပ်။ ဒီသိပ္ပံနည်းကျစာပေမြင်၏စေ့စေ့စပ်စပ်ပြန်လည်သုံးသပ် ဤနေရာတွင်မိမိအဆောင်းပါး။ ဦးနှောက်ကိုဒေသအဘယ်သူမျှမကဒေါက်တာဟီလ်တန်ရဲ့အလုပ်အတွက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်သူကိုးကားသည့်လေ့လာမှုများမကြာသေးမီကဖြန့်ချိလေ့လာမှုမှာဆှေးနှေးသို့မဟုတ်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
အံ့သြစရာကောင်းတာကလေ့လာမှုရဲ့ဆငျးရဲသောဒီဇိုင်း, မကောင်းတဲ့ကွပ်မျက်နှင့်သိသာန့်အသတ်နေသော်လည်း, စာရေးဆရာများလှဲမှားသောကောက်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေတောင်မှသူတို့ရဲ့ touting နိုင်ငံတကာသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထွက်မပို့ဖို့ရွေးချယ် "အောင်မြင်မှု။ "
ဒေါက်တာဟီလ်တန်ကျနော်တို့ဖြစ်စဉ်ကိုစှဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးတစ်ပါရာဒိုင်းပြောင်းလဲမှု၏ချောက်ကမ်းပါးပေါ်ဖြစ်ကြောင်းစောဒကတက်သည်။ သူဟာအကျပ်အတည်းနှင့်တင်းမာမှုပစ္စုပ္ပန်အတွက်ပြောင်းကုန်ပြီ၏အရေးပါမှုကို clouding, ကိုပြဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်, ထိုပြောင်းကုန်ပြီစဉ်အတွင်း "ကဖော်ပြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေတ္ထုများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှစ်ဦးစလုံးမှစှဲ amalgamates ကြောင်းသစ်ကိုပေါင်းစပ်ပါရာဒိုင်းကိုယ်တိုင်ကအခိုင်အမာမှစတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ "ကိုအခြားနီးပါးသုံးကြိမ်အဖြစ်မကြာခဏအသုံးပြုကြသည်" ဒါဟာအခိုင်အမာအဆိုပါ PubMed စာပေဒေတာဘေ့စအတွက်အသုံးအနှုန်းဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်သက်သေဖြစ်ပါသည် " ရောဂါဖော်ပြသောဝေါဟာရကို။ ဒါကြောင့်ဒီလက်ရှိမီဒီယာစိတ်ပြင်းထန်ခြင်းတစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီ၏အလယ်၌နေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏အမြင် clouding က "အကျပ်အတည်းနှင့်တင်းမာမှု" ၏ရိုးရှင်းစွာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သနည်း
အဘယျကွောငျ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျနှစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆောင်းပါးများကိုမီဒီယာတစ်ခုပေါ်တွင်အတွက် hones နှင့်ထိတ်လန့်တန်ဖိုးဟာသူ့ရဲ့ကောက်လှဲကြောင်း, ထိုစွဲလမ်းမူဘောင်များနှင့်ကမေးခွန်းထုတ်တဦးတည်း supporting တဦးတည်းထွက်လာကြသောအခါ? အသောင်းအဘယ်သူ၏အဖြစ်မှန်ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် invalidated ဖြစ်ပါတယ်လူနာထောင်ပေါင်းများစွာ၏များအတွက်ရရှိလာတဲ့ဂယက်ရိုက်ဘာတွေလဲ? အဆိုပါ 1980s ခုနှစ်တွင်လိင်စွဲသူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုမတည်ရှိခဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာများကပြောကြားခဲ့ကြသည်။ ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်တည်ရှိ ပြု. , ကုသမိမိတို့ထောက်ခံမှုအုပ်စုများဖန်တီး, ယခု "က S-ပညာသင်ဆုများ" ၏ကွန်ရက်သောင်းချီနေ့စဉ်လူပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏အရေးပါအခမဲ့စောင့်ရှောက်မှုပေးသည်သူတို့ကိုမကူညီခဲ့ဘူး။ အကြောင်းမူကား, ဒီတော့ Clinician အဖြစ်ကျနော်တို့အနေနဲ့ကဒီတစ်ခုစွဲနေတဲ့မလှူဟုတ်မဟုတ်ငြင်းခုန်ဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်စဉ် ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ် ပြဿနာဖြစ်စေ, မြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, ကျနော်တို့ပြဿနာမတည်ရှိပါဘူးကြောင်းငြင်းခုံခြင်းကိုမသငျ့သညျ။ နှင့်မီဒီယာတစ်ခုခုမပေးသင့်ပါတယ်။
အလားတူဖြစ်စဉ်ရာစုနှစ်၏အလှည့်မှာအရက်အတူဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အရက်စွဲနေတဲ့နေဖြင့်ပေါ်ယူဆောင်ကို "ကိုယ်ကျင့်တရားမြော်" အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည် "willpower မရှိခြင်း။ " ဒါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာမှာသည်အထိမဟုတ်ခဲ့, ငါတို့အပြည့်အဝစွဲ၏ရောဂါ concept ကိုနားလည်ရန်စတင်သောအခါကပိုကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ဖြစ်လာခဲ့သည်သော။ ဒါကြောင့်အဘယျကွောငျ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘဲအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းတစ်ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုဖို့ထက်လိင်စွဲ "မိန်းမ" နှင့် "schmucks" ဟုခေါ်သောမယ်လို့လဲ?
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကရှိတယ်ဒီတော့ဝေး ... ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တံဆိပ်များ၏ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုကိုစဉ်းစားပါစေ လိင်စွဲလမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမလှူ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါ, hypersexual အပြုအမူရောဂါ, Out-of-ထိန်းချုပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ယခုအသစ်တခုတဦးတည်း: မြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ။ တံဆိပ် "လိင်စွဲလမ်း" ထက်အခြားသူများအားအသုံးပြုခြင်းအားသာချက်များကိုများစွာသောလူရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာက client များဟောပြောသောဘာသာစကားကိုဖြစ်ပါတယ်။ clients မှမလာကြဘူး ဆေးဝါးကုသခြင်းပညာ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အရှိထင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကြောင့် "hypersexual အပြုအမူရောဂါ," သူတို့က "လာလိင်စွဲ။ "ဒုတိယအချက်ကြောင့်အများဆုံးမကြာခဏဆေးသမားအသုံးပြုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ တတိယအချက်အနေနဲ့စွဲရှုထောင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ် အရှက်ကွဲခြင်းသည်, အပြုအမူပုံမှန်အထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးသယံဇာတနှင့်ပစ္စည်းများအများကြီးများကိုပေးစွမ်းနှင့်တာဝန်ခံကပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်တဦးတည်းရဲ့အမူအကျင့်များအတွက်တာဝန်ယူကြောင်းထောက်ခံမှုတစ်ခုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် client ကိုဗတ္တိဇံ။ ဆနျ့ကငျြ, ငါတို့သည်အဘယ်သို့ကုသထိရောက်စွာသူသို့မဟုတ်သူမ၏ "မြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ" နဲ့လူနာကူညီရန်အဖြစ်ရှိပါသလဲ
အခါမြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်လိင်စွဲလမ်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သီးသန့်အယူအဆဖြစ်လာသလဲ ရိုးရှင်းစွာအမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲထုတ်မအုပ်စိုးပါဘူးရှိခြင်းအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖော်ထုတ်, ထားတော်မူ၏။ တကယ်တော့အထက်ပါဆွေးနွေးသုတေသနလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့်အယူအဆကိုပံ့ပိုးသောစာပေ၏ကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ concept ကိုချေပရန်အတွက်ဘာမျှမပါဘူး။ ရဲ့အဓိပ္ပါယ်အာဏာရထွက်သည်အထိဖြစ်စေလမ်း, ရဲ့ (လက်ရှိသုတေသနအများစုကြောင်းပါရာဒိုင်းထောက်ခံပါတယ်လိုကြည့်အထူးသဖြင့်ကတည်းက) ဆေးခန်းအသုံးဝင်သောရဲ့တံဆိပ်ကပ်ကြကုန်အံ့။
ရောဘတ် Weiss LCSW, CSAT-S ကနှင့်အတူလက်တွေ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌဖြစ်ပါသည် ဒြပ်စင်အပြုအမူကနျြးမာရေး။ တစ်ဦးကလိုင်စင် UCLA ရဲ့ MSW ဘွဲ့ရသူစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဒေါက်တာပက်ထရစ် Carnes ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထရိန်နင် အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Recovery ကိုအင်စတီကျု Los Angeles မှာ 1995 ၌တည်၏။ သူများအတွက်လက်တွေ့အစီအစဉ်များကိုတီထွင်ထားပါတယ် Nunnelly, Tennessee ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဆိုပါ Ranch, Malibu အတွက်ကုသမှုစင်တာများကတိပေးထား, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Angeles.He နှင့်ဖျောပွလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Recovery ကိုအင်စတီကျုလည်းအမေရိကန်စစ်ဘက်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ဥရောပနှင့်အာရှတလျှောက်လုံးမြောက်မြားစွာသည်အခြားကုသမှုစင်တာများများအတွက်လက်တွေ့ Multi-စွဲသင်တန်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှာဖှံ့ဖွိုးတိုးတပေးထားသည်ဟုသိရသည်။
ဒေါက်တာ Stefanie Carnes, Ph.D ဘွဲ့ကို တစ်ဦးလိုင်စင်ဖြစ်ပါသည် လက်ထပ်ထိမ်းမြား နှင့်မိသားစုကုထုံးတစ်ခု AAMFT အတည်ပြုကြီးကြပ်ရေးမှူး။ ကျွမ်းကျင်မှုသူမ၏ဧရိယာထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအဖြစ်မျိုးစုံစွဲလမ်းနှင့်အတူရုန်းကန်လူနာများနှင့်မိသားစုများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်လည်းပါဝင်သည်, အစာစားခြင်းမမှန် နှင့်ဓာတုမှီခို။ ဒေါက်တာ Carnes ကိုလည်း certified ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါသည် လိင်စွဲလမ်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့်အတူရုန်းကန်စုံတွဲများနှင့်မိသားစုများအတွက်ကုထုံးအတွက်အထူးပြုကုထုံးနှင့်ကြီးကြပ်ရေးမှူး။ လောလောဆယ်သူမ၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါသည် စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်စွဲလမ်းမှုပညာရှင်များများအတွက် International Institute။ သူမလည်းသူမစာအုပ်များအပါအဝင်မြောက်မြားစွာသုတေသနဆောင်းပါးများကိုနှင့်စာပေရေးသားသူဖြစ်ပါသည်, လိင်စွဲလမ်း၏အပေါင်းအဖေါ်များများအတွက်လမ်းညွှန်: တစ်ချိုးနှလုံးသားပွငျ, ရင်ဆိုင်ခြင်းစွဲ: အရက်ကနေ Recovery ကိုစတင်ခြင်းနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ကြေကွဲဖွယ်ရင်ဆိုင်ခြင်း: လိင်စွဲလမ်း၏အပေါင်းအဖေါ်များအဘို့ Recovery ကိုမှခြေလှမ်းများ.